ဂဋ္ဌုန်​ဦး​စော​နေရာမှာ သူ့ကို သရုပ်​​ဆောင်​​စေချင်​တယ်လို့ ​ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်​လိုက်​တဲ့ ယုန်​​လေး – Burmese Online News
ချစ်​ပရိသတ်​​တွေအတွက်​ ဂဋ္ဌုန်​ဦး​စော​နေရာမှာ ယုန်ေ​လးကို သရုပ်​​ဆောင်​​စေချင်​တယ်လို့ ​ပြောတဲ့သူကို ပညာသားပါပါ တုံ့ပြန်​လိုက်​တဲ့ ယုန်​​လေးရဲ့အ​ကြောင်းကို ​ဖော်​ပြ​ပေးလိုက်​ပါတယ်​​နော်​။
ယုန်​​လေးက​တော့ “တစ်မနက်လုံး Cb မှာဒါတွေပဲ လာလာပို့နေကျလို့ ရီစရာ အနေနဲ့ကြည့်ရင် ရီစရာပါ။ ဒါကို အတွေးတစ်ခုဝင်လာတယ် ။ဗိုလ်ချူပ်ရော . ဦးစော ရောလူတော်တွေကြီးပဲလို့ကြားဖူးတယ် ။နှစ်ယောက်လုံး တိုင်ပြည်အတွက် အခုထိရှိနေရင် ဘယ်လောက်ကောင်းမလဲဗျာ . အခုလဲ မညီညွတ်ပြန်ပါဘူး . မှားရင်မှားတယ် . မှန်ရင်မှန်တယ် . ဒဲ့ပြော . ကိုယ်အဖွဲ့စည်းထဲကမို့လို့ ဖုံးပေး ပိုဆိုးတာပေါ့ . နှစ်ဖက်လုံးက လော်ဘီဆိုတာတွေကလည်း ???ဒီ အတိုင်းသွား ကျွန်တော်တို့တွေ ထပ်ရူးဦးမှာ အဓိက က စည်းလုံးရမှာ .ပြောင်းလဲပြီးသွားပြီ ကောင်းလာတာတွေရောပိုဆိုးသွားတာတွေရော .အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုမှာတော့ .အကုန်လုံးကောင်းတာလည်း မရှိဘူး ။
ကိစ္စတိုင်းကြည့်လိုက်ပါ အမှန်တရားတွေကို ဖုံးထားတဲ့ ကိစ္စတိုင်း ကြာစင်ပို ဆိုးသွားတာကြီးပဲ ။ ဦးမဆောင်နိုင်တဲ့ လူကို ဦးဆောင်နိုင်တဲ့နေစည မပေးတာ အကောင်းဆုံးပါ။အသေးစား လုပ်ငန်းလေးတွေ မှာ လူဆယ်ဂဏန်းလောက်တောင် မအုပ်ချူပ်ဖူးတဲ့ လူတွေကို မြှောက်စားမယ်ဆိုရင် ???အားလုံး အမြန်စည်းလုံးပြီးအရည်အချင်း ရှိတဲ့လူများနဲ့ဦးဆောင်နိုင်ပြီး ပြန်လည် ဦးမော့နိုင်ပါစေ။ဆဲလည်း မတတ်နိုင်ဘူး .၂၀၁၅ က ရွှေဈေး . ဒေါ်လာဈေး .ကား. ဖုန်း . လူနေမူ့ အတော် အဆင်ပြေခဲ့တာ ။၂၀၂၀ မှာ အားလုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါစေ ။ ကြိုက်တဲ့လူတက် အရေးကြီးတာအားလုံးအဆင်ပြေဖို့ပါ။” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့အမြင်​ကို ​ပြောထားတာပါ။
ယုန်​​လေးက​တော့ မဟုတ်​မခံ စိတ်​ဓာတ်​ရှိသလို အဆဲခံရလည်း အမှန်​တရားကို ​ပြောရဲသူတစ်​ဦးပါ။ ချစ်​ပရိသတ်​​တွေ​လည်း အရမ်းကို ထိမိလွန်းတဲ့ ယုန်​​လေး​ပြောတာ​တွေကို သ​ဘောကျရင်​ share သွားလိုက်​ကြပါဦး​နော်​။
COVID-19 ဗိုင်းရပ်စ် ကူးစက်ခံရတဲ့ တွမ်ဟန့်ခ်စ်စုံတွဲ ဆေးရုံမှဆင်းနိုင်ပြီဖြစ်